James Swan oo shaaciyey 3 su’aal oo weli ka taagan sharciga doorashada Somalia | Dalka Times - News and Politics
Home SO WARKA James Swan oo shaaciyey 3 su’aal oo weli ka taagan sharciga doorashada...
James Swan oo shaaciyey 3 su’aal oo weli ka taagan sharciga doorashada Somalia
Swan oo ka hadlay sharciga doorashooyinka qaranka ee ay soo meel-mariyeen labada aqal, islamarkaana uu saxiixay madaxweynaha, ayaa sheegay in kasta oo uu yahay tallaabo horey loo qaaday, haddana uusan wax ka qaban su’aalo badan oo taagan.
Swan ayaa si gaar ah u xusay saddex arrimood oo weli aan la ogeyn sida loo maareyn doonaa, kuwaas oo sharciga doorashooyinka uusan jawaabo ka bixineyn, waxaana ay kala yihiin.
1 – Sida loo damaanad qaadayo laguna hirgelin karo qoondada 30% ah ee haweenka ay ku yeelanayaan kuraasta baarlamanka.
2 – Sida doorashada qofka iyo codka ah ee la isku raacay ay dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku kala sugan dhammaan daafaha dalka au uga dhiiban karaan codadkooda.
3 – Iyo Goobaha ay ka dhici doonto cod-bixinta.
James Swan ayaa ugu baaqay baarlamanka iyo guddiga doorashooyinka qaranka, in ayaga oo la tashanaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay si deg deg ah u xalliyaan arrimahan, si diyaar garowga farsamo ee doorashada loo billaabo.
Swan ayaa sidoo kale sheegay inay qasab tahay in dowlad goboleeyada ay qeyb ka noqdaan wada-tashiyada, si loo xaqiijiyo in guddiga doroashooyinka ay xafiisyo ka furtaan dhammaan gobollada dalka oo dhan, si ay uga abaabulaan doorashada.
‘Hoggaamiyihii Al-Shabaab ee weerarka Manda Bay iyo xaaskiisa oo la dilay’
Madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Xusni mubarak oo geeriyooday.
Qoys ehel la ah mid ka mid ah shaqaalaha warbaahinta Dowladda Soomaaliya oo la duqeeyay.
James Swan oo shaaciyey 3 su’aal oo weli ka taagan sharciga...